IPhone 6s Plus wuxuu yeelan doonaa shaashad 2K ah | Wararka IPhone
IPhone 6s Plus wuxuu yeelan doonaa shaashad 2K ah. IPhone 6s ayaa kori doona ilaa 1080p
Paul Aparicio | | iPhone 6s, iPhone 6s Plus
Bandhigyada iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus ayaa xoogaa ka soo fiicnaaday 5s iyo iPhone ka weyn, horumarin ayaa markii ugu horreysay la timid iPhone 4 ee 2010 oo leh muuqaalka 'Retina'. Apple waa laga tagi karaa iyadoo la tixraacayo shaashadaha taleefannadooda gacanta, sidaas darteed, sannad kadib markii ay soo bandhigtay horumarin laga sameeyay shaashadda iPhone 6/6 Plus, Cupertino wuxuu mar kale hagaajin karaa muuqaalkan iPhone 6s / 6s Plus. Shaashadda iPhone 6s waxay noqon doontaa 1080p oo iPhone 6s Plus ayaa la imaan kara shaashad 2K ah.
Tallaabadan, Apple waxay raadineysaa inay laqabato go'aamada ay bixiyaan shirkadaha iska soo horjeeda sida Samsung ama LG oo hagaajinaya shaashadaha hadda jira, kuwaas oo ah Full HD (1920 × 1080) marka loo eego iPhone 6 Plus iyo 720p (1334 × 750) ee ku saabsan iPhone 6.
Si loo helo, Apple waxay dooneysaa inay kordhiso xalka iPhone 6 Plus iyadoo lagu darayo shaashadda Quad HD ama 2K (2560 × 1440), shaashadaha horey u isticmaala taleefannada sida Samsung Galaxy S6 iyo S6 Edge, LG G3 iyo G4 iyo calamado kale oo ka imanaya noocyo kale oo imaan doona inta lagu jiro sanadka 2015.
Waa inaad xoogaa shaki kaqabtaa xantaas. Kuwa bilawga ah, Apple waxay ka tagi doontaa shaashadaha hadda taariikhda hal sano kadib markii la bilaabay, in kasta oo ay run tahay sidoo kale in Ipad 3 uu sii socday sidii sheeko cusub oo ku saabsan 6 bilood. Sababta kale ee shakiga gelineysa ayaa ah in Cupertino aysan ku sifoobneyn la socoshada kooxaha la tartamaya midkoodna.
Bandhigyada xallinta sare ayaa sidoo kale saameyn taban ku leh isticmaalka batteriga, wax aan taleefannada casriga ahi kuu sheegi karin. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ka hadlaynaa shaashado aan aad u weyneyn, sidaa darteed xallinta badan looma baahna. Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen ku heshiin doonno inay ka muhiimsan tahay in la gaaro dhamaadka maalinta marka loo eego inaan awoodno inaan daawado dhowr fiidiyow oo tayo sare leh, tayada taas oo dhanka kale aan si dhib yar u qiimeyn karno.
IPhone 6s ayaa horeyba ula imaan karay Force Touch, ID aqoonsi ah oo la hagaajiyay, 2GB oo RAM ah, kamarad ku dhow 12mp, naqshad la xoojiyay, makarafoon dheeri ah iyo processor ka awood badan oo isticmaalkiisu hooseeyo. Uma baahnid inaad ku darto kor u qaadista shaashadda si aad u soo jiito dareenka iibsadayaasha mustaqbalka. Intaa waxaa dheer, waxaa muhiim ah in casriga ah in uusan daadin batteriga. Waxaan sugi karnaa oo keliya inaan aragno haddii, marka hore, Apple ay hagaajiso shaashadda iPhone-kiisa soo socda iyo, tan labaad, haddii ay leedahay nidaam wax lagu keydiyo tamarta oo la diyaariyey. Bisha Sebtember waxaan ka tagi doonaa shaki.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6s » IPhone 6s Plus wuxuu yeelan doonaa shaashad 2K ah. IPhone 6s ayaa kori doona ilaa 1080p
Javier Camacho sawirka hayaha dijo
Oo waxay noqon doontaa khafiif ah, iyo batteriga? Mahadsanidin.
Jawaab Javier Camacho
Steven Tirado hada hadii ay awalba qiimo lahayd hooyooyinka
Jawaab Jorge Alberto Robles Diaz
Tani waa inay ku dhacdaa iPhone 7, ma ahan 6s. Soosaarayaal badan ayaan wali la jaan qaadin barnaamijyadooda moodalada cusub, waxaan ku arkaa inay aad ugu adagtahay Apple inay ku qasabto inay cusboonaysiiyaan mar kale markay wali cusbooneysiinin barnaamijyadooda barnaamijyada "duugga ah"
Jawaab Steve Jobs
Mike angel paolo dijo
Jawaab Mike Angel Paolo
Qaadashada shaashadda 2K waxay sidoo kale saameyneysaa horumariyeyaasha ay tahay inay ka shaqeeyaan xallintaas si uusan abku ugu dhibban kor u qaadista.
Waxqabadka ayaa sii xumaanaya. Adreno GPUs ama Apple VRs midkoodna kuma haboona (NVIDIA tegra ayaa fiicnaan laheyd).
1080p wali waa halbeegga loogu talagalay nuxurka maaddooyinka badan, sidaa darteed macno badan ma samaynayso (hadda) in loo boodo 2K ama xitaa 4K maaddaama Samsung qorsheyneyso Xusuusin 5.
Galab wanaagsan, Shaqooyinka Anti. Wixii aad leedahay aad ayaan u waafaqsanahay. Ma aqbali doono isbedelka.
Jawaab Pablo Javier Ricagno Cirulli
Jawaab Patricio Meza
Cumar ortiz dijo
Had iyo jeer waa warar isku mid ah oo saafi ah si finalka kaliya uu u hagaajiyo kaamerada wax yar, isdhexgalka, xawaaraha isku xirka qof walibana wuu ogyahay sida ay ku dhamaaneyso si ay uga been abuuraan waxyaabaha Apple aysan xiiseyneynin.
Jawaab Omar Ortiz
Cristhian Huertas A. dijo
Kuwa cusbooneysiinta 1080p iyo 2K waxay soo bandhigaan sidii wax cusub.
Jawaab Cristhian Huertas A
Jose Luis Armero Lopez sawir-haye dijo
Oo miyaanay waxba ka odhan baytariga? Aniga ahaan waa tan ugu muhiimsan ee hagaajinta
Jawaab Jose Luis Armero Lopez
6 batteriga lagu daray aad iyo aad ayuu u fiican yahay.
Jawaab Miryam Espinoza de Sonan
Haa, laakiin sidaa uma badna 6. Waana midda aan haysto
Weli ma fahmin waallidan imika ay wadaan shirkadaha sameeya qaraarada xad dhaafka ah ee taleefannada gacanta. Isbeddelku sinaba ugama muuqan doono haddii PPIs ay sarreeyaan.
Ku jawaab KrlosDki
Waxaan rabaa idaacad FM ah hada. Apple nagama xayiri karto tan.
Uma maleynayo inay iyagu dhigeen, in kastoo ay fiicnaan laheyd.
Ku jawaab Yuri
2k maxaa loogu talagalay
Jawaab si Daniel Montero Campos
IPhone 6s Plus ayaa lahaan doona ... Taasi waa bayaan kadibna waxay ka hadlayaan xanta.
Ma fahmin dagaalkaas maxaa yeelay waxaan ahay kan ugu batteriga ugu yar ...
Jawaab Pedro López
Jair Torres Gonzalez Ciise David Rodriguez Martinez
Jawaab Jorge Blanco
ApPle waxay ku jirtaa gadaal dambe. Berri waxaan iibin doonaa iPhone-keyga oo aanan xitaa sii isticmaali doonin. Waa caajis waana qaali. Kahor intuusan noqon mid qiimo jaban. Rralmente android iyo windows windows waxay ficil ahaan u sameeyaan waxkasta oo iphone ah, kaliya in iphone uu xasiloonyahay laakiin in yar oo sabar ah waxaan ku gaari karnaa mucjisooyin g3 tusaale ahaan.
ApPle waa inuu mar horeba ka fakaraa hoos u dhigista qiimaha halkii uu kordhin lahaa qiimaha. Goor dhow ama goor dambe ayaa dadku ogaan doonaan inay u tahay raaxo qaali ah kuwa qiimeyntoodu ku xiran tahay waxyaabaha. Sida ay halkaas ka sheegaan, in arrimuhu adiga kuu shaqeynayaan oo aanad adigu wax u shaqeynaynin.
Pd iphone 6 oo lagu daray waxa kaliya ee ay ubaahantahay waa 1 GB in ka badan oo wan oo hoos u dhig qiimaha xoogaa waxayna noqon laheyd telefoonka saxda ah.
Kevin coz dijo
A Power VR waa mid aad u awood u leh inuu dhaqaajiyo 2K laakiin si loo gaaro waxqabad wanaagsan 7000 kaararka taxanaha ah ayaa noqon doona ikhtiyaar wanaagsan waxaanan maqlay in uu jiro mid dhaqaaqa 1.1 Teraflops laakiin taasi waa rajo aad u badan oo aan ku ogaan karno in badan ama ka yar Gpu yeelan doonaan
Jawaab Kevin Cooz
Elgato iyo iHome waxay soo bandhigayaan soo jeedintoodii ugu horeysay ee HomeKit
1x28 iPad News Podcast: HomeKit, Google I / O, WWDC iyo inbadan